Esophageal Cancer (အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာ) - Hello Sayarwon
Esophageal Cancer (အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာ) ကဘာလဲ။
အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာသည် လည်ချောင်းမှ အစာအိမ်ထိ ဆင်းသက်သွားသော ပြွန်ချောင်းပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည့် အစာမျိုပြွန်တွင် ကင်ဆာဆဲလ်များ စုဝေးရာမှ ဖြစ်ပေါ်သည်။ အစာများသည် ပါးစပ်မှ အစာအိမ်သို့ အစာမျိုပြွန်မှတစ်ဆင့် ဆင်းသွားသည်။ ကင်ဆာသည် အစာမျိုပြွန်အတွင်းလွှာတွင် စတင်ဖြစ်ပေါ်ပြီး အခြားအလွှာများ နှင့် ခန္ဓါကိုယ် အခြားအစိတ်အပိုင်းများသို့ ပျံ့နှံ့သွားသည်။
Esophageal Cancer (အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အာရှနှင့် အာဖရိက ကဲ့သို့သော ကမ္ဘာ့နေရာအချို့တွင် အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာသည် ပိုအဖြစ်များပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် ပိုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ မြင့်မားစေသော အကြောင်းအရာများကို လျော့ချခြင်းဖြင့် ရောဂါကို စီမံနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုသော အကြောင်းအရာများအတွက် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Esophageal Cancer (အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာ အစောပိုင်းအဆင့်များတွင် မည့်သည့်လက္ခဏာမှ မခံစားရသည်လည်း ရှိနိုင်သည်။ ကင်ဆာအဆင့်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ သင်သည် အောက်ပါလက္ခဏာများကို ခံစားရလိမ့်မည်။
အစာမျိုချလျှင် နာကျင် ၊ ခက်ခဲခြင်း
အစာစားစဉ် မကြာခဏ သီးခြင်း
အကယ်၍ သင်သည် နာတာရှည် အက်ဆစ်ရည်ပြန်ဆန်တက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေများစေသည့် ကင်ဆာအကြိုအခြေအနေ Barrett’s esophagus ဟု ခေါ်သည့် ရောဂါဖြစ်နေလျှင် သင့်ဆရာဝန်ဆီ သွားပါ။ ထိုရောဂါအခြေအနေဆိုးလာလျှင် ပြသသည့် လက္ခဏာများအကြောင်း ဆရာဝန်အား မေးမြန်းပါ။
အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာ စစ်ဆေးမှုကို ပုံမှန်အမြဲ မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အန္တရာယ်များသော လူများကို အလွယ်တကူ အတည်ပြု၍ မရခြင်း နှင့် မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သော အန္တရာယ်များရှိခြင်း ကြောင့် ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင့်တွင် Barrett’s esophagus ရောဂါဖြစ်ပွားနေလျှင် ကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်း၏ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးကို သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Esophageal Cancer (အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာ ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများကို သဲသဲကွဲကွဲ မသိရှိရပါ။ အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာသည် အစာမျိုပြွန် ဆဲလ် DNA တွင် ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားသည်။ ထိုပြောင်းလဲမှုများသည် ဆဲလ် ကို ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ ပွားများစေသည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သော ဆဲလ်များ စုဝေးလာပြီး အစာမျိုပြွန်တွင် ကင်ဆာကျိတ်ဖြစ်လာသည်။ ထိုကင်ဆာကျိတ်သည် အနီးအနားရှိ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများနှင့် အခြား ခန္ဓါကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ ဆီသို့ ပျံ့နှံ့နိုင်သည်။
အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာတွင် အဖြစ်များသော အမျိုးအစား (၃) မျိုးရှိပါသည်။
Squamous cell carcinoma ။ ။ ဤအမျိုးအစားတွင် အစာမျိုပြွန်နံရံတွင်ရှိသော ပြားပြီးသေးငယ်သော ဆဲလ်များမှ ကင်ဆာစဖြစ်သည်။ ဤပုံစံသည် အစာမျိုပြွန်၏ ထိပ်ပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်းတွင် အများဆုံး ဖြစ်ပွားသည်။ သို့သော် မည်သည့် နေရာတွင် မဆို ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Adenocarcinoma ။ ။ ဤအမျိုးအစားတွင် ကင်ဆာသည် အစာမျိုပြွန်၏ အရည်နှင့် အကျိအချွဲများ ထုတ်လုပ်ပေးသော ဂလင်းဆဲလ်များတွင် စတင်ဖြစ်ပွားသည်။ ဤအမျိုးအစားသည် အစာမျိုပြွန်၏ အောက်ပိုင်းတွင် ပိုအဖြစ်များသည်။
အခြား ရှားပါးသော အမျိုးအစားများ။ ။ အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာ၏ ရှားပါးသော ပုံစံများမှာ Choriocarcinoma (အချင်းဆဲလ်မှ စသော သားအိမ်ကင်ဆာ) ၊ Lymphoma (ပြန်ရည်ကျိတ်ကင်ဆာ)၊ Melanoma (မှဲ့ကင်ဆာ)၊ Sarcoma (အရိုးကြွက်သားတွင် ဖြစ်သော ကင်ဆာ) ၊ Small cell cancer (အဆုတ်ကင်ဆာ)။
Esophageal Cancer (အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာ ကို ဖြစ်ပွားမှုများစေတဲ့ အကြောင်းအရင်း များစွာရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့မှာ အောက်ပါတို့ပါဝင်ပါတယ်။
စားချဉ့်ပြန်ရောဂါ ။ ။ အစာအိမ်အတွင်းရှိ အစာများနှင့် အစာချေရည် အက်ဆစ်များသည် အစာမျိုပြွန်တွင်းသို့ ပြန်ဆန်တက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အစာမျိုပြွန် အရည်နှင့် အကျိအချွဲထုတ်သော ဂလင်း ကင်ဆာ (adenocarcinoma) ဖြစ်နိုင်ချေ သိသိသာသာ များစေသည်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း (သို့) အခြား နည်းဖြင့် ဆေးရွက်ကြီးသုံးခြင်း
Barrett’s esophagus ။ ။ ဤအခြေအနေတွင် အစာမျိုပြွန်အောက်ပိုင်းတွင် ကင်ဆာဖြစ်စေသည်။ Barrett’s esophagus သည် စားချဉ့်ပြန်ရောဂါကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အစာမျိုပြွန်တွင်းရှိ အစာချေရည်အက်ဆစ်များသည် ဆဲလ်ပြောင်းလဲမှုကို ဖြစ်စေပြီး adenocarcinoma ဖြစ်ပွားနိုင်ချေများစေသည်။
ထို့ပြင် အမျိုးသားနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများသည် အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ အန္တရာယ်ပိုများသည်။ Adenocarcinoma ဖြစ်နိုင်ချေ အန္တရာယ်သည် လူဖြူ အမျိုးသားများတွင် ပိုမြင့်မားသည်။ သို့သော် Squamous cell carcinoma အမျိုးအစားကင်ဆာကတော့ အာရှ အမျိုးသားများနှင့် အသားအရောင်ရှိသော အမျိုးသားများတွင် ပိုအဖြစ်များသည်။
Esophageal Cancer (အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာ ကို ရှာဖွေအတည်ပြုသော စစ်ဆေးမှုများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါသည်။
Barium swallow X-ray ။ ။ ဘေရီယမ် မျိုချပြီး ရိုက်သော X-ray ဓါတ်မှန် တွင် အစာမျိုပြွန်ကို အလွှာတစ်ထပ်အုပ်ပေးသော ဘေရီယမ် အရည်ကို သောက်ရသည်။ ဤနည်းသည် X-ray ဓါတ်မှန်တွင် အစာမျိုပြွန်ကို တွေ့မြင်ရစေပြီး ဆရာဝန်အား အစာမျိုပြွန်တွင် ရှိသော ပြဿနာများကို အတည်ပြုနိုင်စေသည်။
အစာမျိုပြွန် မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း။ ။ ဆရာဝန်က သေးငယ်ပေါ့ပါးသော ပြွန်သဏ္ဍာန် မှန်ပြောင်းကို လည်ချောင်းမှ တစ်ဆင့် အစာမျိုပြွန်အတွင်းသို့ ထည့်ကာ စစ်ဆေးသည်။ မှန်ပြောင်းကြည့်ရင်း အာထရာဆောင်းရိုက်ခြင်းသည် အသံလှိုင်းများကို ထုတ်လွှင့်ပေးပြီး အနီးအနား တစ်ရှုးများတွင် ကင်ဆာဆဲလ် ပါဝင်မှု အတိုင်းအတာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုသိရှိစေသည်။
အသားစ စစ်ဆေးခြင်း ။ ။ မှန်ပြောင်းကြည့်စဉ်တွင် ဆရာဝန်သည် သင့်အစာမျိုပြွန်မှ ဆဲလ် (သို့) တစ်ရှုး ယူပြီး မိုက်ခရိုစကုပ်အောက်တွင် ကင်ဆာ ဆဲလ် ရှိမရှိ စစ်ဆေးနိုင်သည်။
အခြားစစ်ဆေးမှုများ ။ ။ ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန် (CT) ၊ positron emission tomography (PET) ၊ ရင်ဘတ်တွင်း အပေါက်ဖောက် မှန်ပြောင်းနှင့် ရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်း (Thoracoscopy) နှင့် ဝမ်းဗိုက်တွင်းအပေါက်ဖောက်ပြီး မှန်ပြောင်းနှင့် ရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်း (Laproscopy) များကို အစာမျိုပြွန် ပြင်ပ အစိတ်အပိုင်းများသို့ ကင်ဆာ ပျံ့နှံ့မှုကို စစ်ဆေးရန် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤနည်းကို ကင်ဆာအဆင့် သတ်မှတ်ရန် စစ်ဆေးခြင်းဟု ခေါ်သည်။ ဆရာဝန်က သင့်ကို ကုသမှုပေးရန် စီစဉ်ရာတွင် ဤအချက်အလက်များ လိုအပ်သည်။
Esophageal Cancer (အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကင်ဆာဆဲလ် အမျိုးအစား၊ ကင်ဆာအဆင့် နှင့် သင့်ကျန်းမာရေးပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ကုသမှုကို ဆုံးဖြတ်သည်။
အစာမျိုပြွန် အစိတ်အပိုင်းအချို့ (သို့) အားလုံးကို ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားသည်။
ကင်ဆာဆဲလ်များကို ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့် သတ်သည်။
ခန္ဓါကိုယ်တစ်လျှောက်ရှိ ကင်ဆာဆဲလ်များကို ဦးတည်သော အစွမ်းထက်သော ဆေးဝါးများကို ပေးသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသမှု ၊ ခွဲစိတ်မှု များနှင့်အတူတွဲပေးသည်။ ခွဲစိတ်မှုမပါဘဲ ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသမှုတစ်တည်းနှင့်လည်း တွဲပေးတတ်သည်။
အစောပိုင်းအဆင့် ကင်ဆာဆဲလ်များကို အထူးလေဆာ အလင်းကုထုံး နှင့် ကုသည်။
လျှပ်စစ်စီးကြောင်းနှင့် အေးခဲပစ်ခြင်း (Electrocoagulation)
အစောပိုင်းအဆင့် ကင်ဆာဆဲလ်များကို လျှပ်စစ်စီးကြောင်းနှင့် အေးခဲဖျက်ဆီးသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာ ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာကို ရပ်တန့်နိုင်သော နည်းလမ်းမရှိသော်လည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ အန္တရာယ်နည်းစေသော အချက်အချို့ရှိပါသည်။
စီးကရက်နှင့် ဆေးရွက်ကြီးဝါးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။
အရက်လျော့သောက်ခြင်းသည်လည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ အန္တရာယ်ကို လျော့ချပေးသည်။
သစ်သီးဝလံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် အမြောက်အမြားပါသော အစားအသောက်စားခြင်း နှင့် ကျန်းမာသော ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည်လည်း အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်သော ထိရောက်သော နည်းလမ်းများ ဖြစ်သည်။
http://www.webmd.com/digestive-disorders/esophageal-cancer#3. Accessed November 15, 2016.
http://www.healthline.com/health/esophageal-cancer#Overview1. Accessed November 15, 2016.
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/esophageal-cancer/basics/treatment/con-20034316. Accessed November 15, 2016.